सिंहदरबार भित्रैका सचिव र कर्मचारीले नै टे’रेनन् प्रधानमन्त्रीलाई-ओली नै तिनछक, नेताकार्यकर्ता चिन्तित ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/सिंहदरबार भित्रैका सचिव र कर्मचारीले नै टे’रेनन् प्रधानमन्त्रीलाई-ओली नै तिनछक, नेताकार्यकर्ता चिन्तित !
सिंहदरबार भित्रैका सचिव र कर्मचारीले नै टे’रेनन् प्रधानमन्त्रीलाई-ओली नै तिनछक, नेताकार्यकर्ता चिन्तित !
काठमाडौं : संघीय राजधानी मात्र नभएर देशकै प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको कर्मचारी संयन्त्र नै सबैभन्दा धेरै अटेरी देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष नि’गरानीको सतर्कता केन्द्रको निर्देशनसमेत कर्मचारीले लत्याएको पाइएको छ। १५ दिनभित्र का’रवाहीको जानकारी पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि छ’ड्के अनुगमनको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि अधिकांश मन्त्रालयले का’रवाहीको जानकारी नपठाएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ। का’रवाहीको विवरण मन्त्रालय/कार्यालयका प्रमुखले पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
सहसचिवसम्मका कर्मचारी छ’ड्केमा परेकाले मन्त्रालयका सचिवले का’रवाहीको विवरण पठाउन आलटाल गरिरहेका छन््। प्रधानमन्त्रीको नि’गरानीमा रहेको सतर्कता केन्द्रले भ्र’ष्टा’चा’र तथा अ’नुचि’त काम न्यूनीकरण गर्न स्थलगत अ’नुगमन, नि’गरानी, छ’ड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने व्यवस्था छ। उसले मन्त्रालय/ कार्यालयको अनुगमन गर्ने क्रममा कर्र्मचारीको कार्यालय समय पालना र तोकिएको पोसाक लगाए/नलगाएको अनुगमन गर्दै आएको छ।
केन्द्रले ०७६ असोस २८ गते सिंहदरबारमा रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा छ’ड्के गरेको थियो। असोज ३० गते सिंहदरबारमै रहेका खानेपानी मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, मुद्रण विभागको पनि अ’नुगमन गरेका थियो। दुई सहसचिव सहितका कर्मचारी छड्केमा परेका थिए। केन्द्रले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर कारवाहीको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालय/कार्यालयलाई पठाउने गरेको छ। यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोस्टमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका हुन्।
नेपालमा शंकास्पद बिरामीको रगत र र्याल नमुना जाँच गर्दा कोरोना भएको पुष्टि
सडकमै सकियो राइको परिवार, आमा, छोरा, नाती, ज्वाई सबैले छोडे संसार ! गाउँ पुरै सोकमा !